Xannaanada Minnetonka, Chanhassen, Hopkins | Dugsiyada Minnetonka
Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay bixiyaan mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu fiican ee xanaanada caruurta ee Minnesota. Hadafkeena koowaad waa inaan ku dhiirrigelino carruurta inay jeclaadaan barashada iyadoo loo marayo xeeladaha waxbaridda bulshada iyo shucuurta. Manhajkeena adag wuxuu isku dheelitiraa firfircooni, ciyaar, gacan qabasho barasho shaqsi, waxbarid yar iyo koox weyn oo loogu talagalay in lagu kobciyo xirfadaha tacliimeed ee hore loona hormariyo horumarka bulshada.
Soo Degso Buugga Xannaanada
Macallimiinteena Xanaanada waxay leeyihiin jacayl dhab ah oo loogu talagalay carruurta iyo Xannaanada. Waxay ku dhiirrigeliyaan dareen ah inay layaabaan, ogaadaan, abuuraan oo heer sare gaaraan. Iyagoo adeegsanaya sida ugufiican ee koritaanka caruurnimada iyo cilmi baarista maskaxda, waxay shidayaan jaceylka barashada oo si qurux badan ugu gubanaya ardayda Minnetonka illaa qalin jabinta iyo wixii ka dambeeya.
Xanaanada Caruurta Inta Lagu Jiro COVID-19
Dugsiyada Minnetonka waxay leeyihiin tilaabooyin amaan si loo ilaaliyo ardayda inta lagu gudajiro Cudurka faafa ee COVID-19, iyadoo la sii wado xaqiijinta khibrad waxbarasho oo aad u sareysa.
Baadhitaanka Carruurnimada Hore : Baaritaankan waxaa looga baahan yahay Gobolka Minnesota dhammaan carruurta da'doodu tahay dugsiga barbaarinta (da'doodu tahay saddex illaa shan jir), ka hor inta aan la gelin dugsiga dadweynaha. Haddii aad horey u dhammeystirtay baaritaanka iyada oo loo marayo Minnetonka, waad wada diyaar tahay! Haddii baadhitaankan lagu dhammaystiray degmo kale, fadlan soo-koobidda Soo-koobidda Baadhitaanka ilmahaaga marka aad gudbineyso shahaadada dhalashada iyo caddeynta cinwaanka xilliga diiwaangelinta. Haddii ilmahaagu weli u baahan yahay inuu dhammaystiro Baaritaanka Carruurnimada Hore, halkan iska qor .
Diiwaangelinta khadka tooska ah ee qoysaska degan Degmadda Dugsiga Minnetonka ayaa hadda furan . Qoysasku waa inay diiwaangeliyaan dhammaan carruurta galaya Kindergarten deyrta 2021, xitaa haddii walaalaha kale ay hadda ka diiwaangashan yihiin.
Xiriir dheeraad ah oo ka socda Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxaa la soo diri doonaa Oktoobar. Waxaa sidoo kale jiri doona fursado lagu booqdo iskuulada bilaha Nofeembar iyo Diseembar . Kani waa goorta aad u baahan tahay inaad go'aan ka gaarto dugsiga aad dooratay.
Waqtiga kama dambaysta ah ee mudnaanta degganaha si loo buuxiyo foomka diiwaangelinta khadka tooska ah waa Janaayo 15, 2021. Codsiyada degganayaasha waa la aqbali doonaa ka dib waqtiga kama dambaysta ah, laakiin dugsiyada ama barnaamijyada xulashada koowaad ayaa la buuxin karaa.
Waqtiga kama dambaysta ah ee gobolka ee codsiyada diiwaangelinta furan waa Janaayo 15. Codsiyada soo daahay waa la aqbali doonaa sida boosku u oggol yahay. Qoysaska ka diiwaangashan furan ee la oggol yahay ayaa loo soo diri doonaa emayl ay ku qoran yihiin tilmaamo ay iskaga diiwaangeliyaan khadka tooska ah.
Dugsiyadeena hoose waxay qabtaan xaflada soo dhaweynta Xanaanada xilliga guga dhammaan ardayda diiwaangashan. Fadlan ka eeg emaylkaaga wixii xiriir dheeri ah.
Dhammaan qoysaska ka diiwaangashan waxay ka heli doonaan emayl bartamaha Ogosto Waaxda Teknolojiyada Minnetonka oo leh tilmaamo ku saabsan sheegashada koontada Skyward ee qadada iyo wixii ka badan.
Diiwaangelinta K-12 ee 2021 waxay hadda u furan tahay dhammaan dadka deggan. Ogow haddii aad ku nooshahay degmada .
Muddada ugu dambeysa ee mudnaanta diiwaangelinta deganayaasha waa Janaayo 15, 2021.
Dugsiyada doorashada koowaad ama barnaamijyada waa la buuxin karaa.
Arday ma ka heysataa Degmadda? Booqo MySSO, xulo Skyward oo buuxi diiwaangelinta khadka tooska ah ee ardayga cusub.
Soo gal MySSO
Qoysaska Aan Deganeyn
Dhammaan qoysaska ka baxsan degmada ee doonaya inay furaan isqorista waa inay buuxiyaan arjiga isqorista furan.
Waqtiga kama dambaysta ah ee gobolka ee codsiyada diiwaangelinta furan waa Janaayo 15, 2021.
Qoysaska waxaa la ogeysiin doonaa ugu dambayn Febraayo 15, 2021 iyadoo loo soo bandhigi doono iskuul / barnaamij . Waqtigaas waxaa lagaa codsan doonaa inaad dhammaystirto diiwaangelinta khadka tooska ah.
Diiwaangelinta Furan ee La Oggolaaday
Shaqaalaheena diiwaangelinta ardayda ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan. Wac 952-401-5009 haddii magaca dambe ee qoyskaagu ka bilaabmo AL ama 952-401-5012 haddii magaca dambe ee qoyskaagu ku bilowdo MZ.